ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေနှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိစ္စ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (DVB)
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေနှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိစ္စ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (DVB)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 1:08 PM
တို့ရဲ့ အင်အားကိုယူရမှာပါ ဦးနေ၀င်းတောင် ဦးသန်းရွှေက လုပ်ခဲ့သေး
တော့ပါဘူးထင်ပါတယ်၊ ပြန်လှည့်ရဲ လှည့်
ကြည့်၊ ရရင်ရ မရရင်ချ ဆိုတာခုချိန်ခါပါ
Dr show three high lights in his debate.
I think U Than shwe can not change his mind cause of his properties and generals's properties.So we have just one way to make strike the whole country like (8888 ).
If not we can never have democracy and it's government.
DASSK has not to lead for whole country strike.
စစ်တပ်က ပြောင်းချင်လို့ပြောင်းလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့လုပ်တာလည်း ပါလို့ ပြောင်းလာတာလို့ ထင်တဲ့သူတွေ အခုလည်း ဗမာပြည်ကြီးနဲ့ အဲဒီ ၂၀၀၈ ကြီးကို ပြောင်းလာအောင် ပြင်ကြမယ် ဖျက်ကြမယ်ဆိုရင် ကြည့်ချင်သေးပါတယ် အမောင်တို့ကြောင့် ၂၀၀၈ ကြီးပြောင်းသွား ပျက်သွားပြီဆိုတာကို ကံကောင်းပါစေ နင်းပြားဗမာပြည်သူများ။
ဒေါက်လွဏ်းဆွေနဲ. တွေ.ဆုံမေးမြန်းတာ ကောင်းတယ်။
သူပြောတာ ၊ ယူဆတာတွေဟာ
ပြည်သူတွေရဲ. စိတ်ထဲမှာရှိတာ ၊ ခံစားနေရတာနဲ.
ယခင် စစ်အစိုးရဟာ သူတို.ရဲ. တိုင်းပြည်ဆီက လုယက်၊
ခိုးဝှက် ရယူထားတဲ. စည်းစိမ် ဥစ္စာတွေ တည်မြဲဖို.
အာဏာရှင်စနစ်ကနေ ဒီမိုကရေစီ(အတု) စနစ်ဆီ
အချိန်ဆွဲ ဟန်ပြ သွားနေတယ် ဆိုတဲ.ပြည်သူတွေ အရင်ထဲကထင်ထားခဲ.တာတွေက
ယနေ.အချိန်ကာလမှာ မှန်နေတယ်ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း
ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ DASSK ရဲ. NLD ကလည်း
သိခဲ.ပေမယ်. လည်း တိုင်းပြည်ကို ငြိမ်းချမ်းတဲ.
နည်းနဲ. ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆီပြောင်းဖို.ရာမှာ